ကျောက်တုံးကိုဘယ်လိုတိုက်ခိုက်ရမလဲ။ - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / ကျောက်တုံးကိုဘယ်လိုတိုက်ခိုက်ရမလဲ။
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-08-19 မူလ:ဆိုက်ကို
WHether သည်အလျင်အမြန်နှင့်အတူလျင်မြန်စွာကြိတ်ဆုံဆုံဖို့ဖြစ်ပါသည်သေးငယ်တဲ့ကြိတ်ကိရိယာများသို့မဟုတ် 3D ပတ်ပတ်လည်ထွင်းထုနှင့်လက်ကိုင်ကြိတ်စက်များ,ထိုအရာလွယ်ကူသည်ထိုလူထုအဘယ်သူသည်ထွင်းထုကစား.ကျောက်တုံးထွင်းထုထားသောထုတ်ကုန်များ၏ဖန်တီးမှုဖြစ်စဉ်သည်လူအများစုအတွက်ထူးဆန်းသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ခက်ခဲသောအလုပ်တစ်ခုဟုထင်ကြလိမ့်မည်။ ဒီဆောင်းပါးမှာကျောက်တုံးကျောက်တုံးကိုဘယ်လိုထွင်းရမယ်, ထွင်းထုထားတဲ့ကျောက်တုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိကျွမ်းလာမယ်ဆိုတာကိုမင်းတို့ပြောမယ်။ ပထမ ဦး စွာအဆင့်များကိုကြည့်ကြစို့ရိုးရှင်းသောသုံးဖက်မြင်ကျောက်ထွင်းထုဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်သည်။
1. ကျောက်တုံးကိုထွင်းထုထားသောကျောက်တုံးကိုရွေးချယ်ပါ။ ၎င်းကိုဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရအများအားဖြင့်ရွေးချယ်ထားသည်သို့မဟုတ်သင်၏အကြိုက်ဆုံး။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျောက်တုံးများသည်အပြာရောင် - မီးခိုးရောင် bluestone, အဖြူရောင်နှမ်းအဖြူ, အဝတ်လျှော်အဖြူစကျင်ကျောက်, အနီရောင်ပုစွန်နီစကျင်ကျောက်,ဒီဇိုင်းများအရပုံစံများအရပုံစံများ၏ပုံသဏ္ arge ာန်ကိုထိတွေ့ရန်လွယ်ကူသည့်ကျောက်ခဲများ။Wဟောင်ကောင်ကျောက်တုံးများသည်ထွင်းရန်မလွယ်ကူကြောင်း, ထွင်းထုသည့်အခါချိုးဖဲ့ရန်လွယ်ကူကြောင်းသိသည်အထူးကြိတ်ကိရိယာများ။
2. လိုအပ်သည့်အရွယ်အစား၏ကျောက်တုံးများ။ ကျောက်တုံးs ပို့သည် သို့စက်ရုံ,သူတို့ကများသောအားဖြင့်ဖြစ်ကြသည်ကြီးမားသောပိတ်ပင်တားဆီးမှုနှင့်အတူ sအတော်လေးမီတာကြာပြီထိုသူတို့ကိုကြမ်းတမ်းသောကျောက်တုံးများဟုခေါ်သည်။ ဒီတော့ဒီကြမ်းတမ်းတဲ့ကျောက်တုံးများဖြတ်ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပထမ ဦး စွာသေးငယ်တဲ့ပိတ်ပင်တားဆီးမှုသို့ကြီးမားတဲ့လွှနှင့်အတူသို့မဟုတ်ကြီးမားသောပါဝါ tool ကိုကျောက်ထွင်းထုထုတ်ကုန်၏အရွယ်အစားအရသိရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ထုတ်ကုန်လျှင်ခင်ဗျားတို့အရှည်, အကျယ်နှင့်အမြင့်အတွက် 1 မီတာကိုထွင်းချင်တယ်သင်လုပ်ဖို့ ... လိုပါတယ်ဖြတ်ခြင်းသူတို့ကိုသို့1 မီတာထက်ပိုသောအကျယ်, အကျယ်နှင့်အမြင့်နှင့်အတူအနည်းငယ်ကျောက်တုံးကျောက်တုံးကျောက်တုံးနှင့်ဤကျောက်ပေါ်မှာထွင်းကြလော့နှင့်အတွက်ကြိတ်ကြိတ်mini လက်ကြွေစက်သို့မဟုတ်ကြိတ်စက်သေးသေးလေး။
3. ကျောက်တုံးပေါ်တွင်အောက်လိုင်းဆွဲပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, အကြမ်းဖျင်းမပါဘဲတိုက်ရိုက်ထိတွေ့နိုင်သည့်ကျွမ်းကျင်သောကျွမ်းကျင်သူများလည်းရှိသည်ကျောက်ပေါ်မှာ။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်လက်မှုပညာ၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ထုတ်ကုန်များ၏အစုံပေါ်မူတည်သည်။အကယ်. သင်ဟာအတွေ့အကြုံမရှိသေးပါကကျောက်တုံးပေါ်တွင်အောက်လိုင်းကိုဆွဲယူပြီးဒီဇိုင်းနှင့်အညီအဆင့်ဆင့်ပြီးအောင်လုပ်ခြင်းသည်သင်ကြမ်းတမ်းသောကျောက်တုံးများနှင့်အချိန်ကိုမဖြုန်းတီးနိုင်ပါ။
4 ။Cအထွေထွေပုံသဏ္ ex ာန်ထုတ်ပြီးပိုလျှံသောလုပ်ကွက်များကိုဖယ်ရှားပါပြီးတော့ Cထုတ်ကုန်၏ပုံသဏ္ out ာန်ထွက် arve ။
6။ အရောင်သို့မဟုတ် polishing ထွက်သယ်ဆောင်အတွက်အသေးစားပါဝါကြိတ်စက်။ထိုအခါ workpiece ပြုမိသည်။
အထက်ဖော်ပြပါအချက်များသည်အထွေထွေအဆင့်များဖြစ်သည်။ဟုတ်ပါတယ်,t ကိုအလွန်ခက်ခဲသည်အပေြာင်းအလားတူ။ ဒါပေမယ့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လက်သမားများအတွက်,သူတို့သုံးနိုင်တယ်ကွဲပြားခြားနားသောပါဝါ tools တွေကိုသို့မဟုတ်ပါဝါကြိတ်စက်ဖြတ်.စည်းဝေးပွဲလိုင်းတစ်နေ့တွင်များစွာသောပုံသေထုတ်ကုန်များပြုလုပ်ရန်။
သေးငယ်တဲ့ကြိတ်ကိရိယာများ လက်ကိုဆုပ်ကိုင်ကြိတ် အထူးကြိတ်ကိရိယာများ ကြီးမားသောပါဝါ tool ကို mini လက်ကြွေစက် သေးငယ်တဲ့ကြိတ်စက် လျှပ်စစ်ကြိတ်ကိရိယာကိရိယာ အသေးစားပါဝါကြိတ်စက် ကွဲပြားခြားနားသောပါဝါ tools တွေကို ပါဝါကြိတ်စက်